Labo Is Neceb: Katrina Iyo Deepika Oo SRK La Sameyn Doonaan Filimka Uu Cilinka Ku Matalaayo - Hablaha Media Network
Labo Is Neceb: Katrina Iyo Deepika Oo SRK La Sameyn Doonaan Filimka Uu Cilinka Ku Matalaayo
HMN:- Labada aan is arki karin Katrina Kaif iyo Deepika Padukone ayaa la sheegay inay kasoo wada muuqan doonaan filimka SRK cilinka ama ninka aadka u gaaban ee dhulka ku dhagan ku matali doono.
Filimkaan waxaa Director ka ah Anand L. Rai waxayna duubistiisa magaalada New York ka bilaaban doontaa bartamaha bisha Maarso ee nagu soo fool leh.
Shabakad DNA ayaa sheegtay in Deepika iyo Katrina ay aqbaleen inay filimkaan SRK jaceyl kula wadaagaan sidoo kalena waxaa loo soo bandhigay labo door oo saameyn ahaan isku mid ah oo aan la diidi karin.
Waa arin xiiso badan sida Katrina iyo Deepika iskula shaqeyn doonaan madaama labadaan atirisho dagaal muuqdo ka dhaxeeyo waligood xiriir quman kama dhaxeynin.
Deepika waxay Katrina ku eedeesay inay hada ka hor ka xoogtay Ranbir Kapoor oo ay mudo wada socdeen sidoo kalena Katrina waxay Deepika ku nacday inay Ranbir ka ag dhaweyd sanadihii ugu dambeeyay.
Weliba Katrina inay Ranbir kala haraan waxaa la sheegay in Deepika ay sabab u ahayd madaama ay si xad dhaaf ah Ranbir isugu dhawaadeen iskuna fahmeen markii ay filimka Tamasha wada duubayeen ama xayeysiin u sameenayeen si wadajir ah.
Waa wax la wada ogyahay in Katrina iyo Deepika xiriir wanaagsan dhex oolin laakiin SRK dartiis iyo labada door oo loo soo bandhigay oo awood badan awgeed ayay ku aqbali doonaan inay isla shaqeeyaan.
Waa macquul ah shaqada ay wada qaban doonaan awgeed inay labadaan atirisho ku heshiiyaan ileen Ranbir Kapoor ay isku dagaali jireen hada dhexdooda kuma jiro!